ज्योति लाइफको आईपीओ निष्कासन मिति सर्यो, अब कहिलेबाट ? - Arthasansar
ज्योति लाइफको आईपीओ निष्कासन मिति सर्यो, अब कहिलेबाट ?
मंगलबार, १८ फागुन २०७७, १५ : ५३ मा प्रकाशित
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले फागुन २३ गते आइतबारदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भनेकाे साधारण सेयर (आईपीओ ) काे निष्कासन मिति परिवर्तन भएकाे छ । अब उक्त आइपिओ फागुन २१ गते, शुक्रबारदेखि निष्कासन हुनेछ ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङको आग्रहमा आइपिओकाे निष्कासन मिति परिवर्तन गरिएकाे कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।
आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ६६ हजार कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।